ယဉ်ကျေးစွာ ငြင်းဆိုခြင်း (စကားပြော သင်ခန်းစာ) - Myanmar Network
ယဉ်ကျေးစွာ ငြင်းဆိုခြင်း (စကားပြော သင်ခန်းစာ)
Posted by Soe Soe Win on May 17, 2013 at 16:50 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
သင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါ၊ တစ်ခုခုကို ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ခု လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာ တစ်ခါတလေကျတော့ ငြင်းဆိုရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ No (ဟင့်အင်း) ဆိုပြီးပြောလိုက် တာကတော့ ယဉ်ကျေးမှုသိပ်မရှိတဲ့ ပုံစံပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငြင်းဆိုဖို့အကြောင်းရှိလာရင် သူတစ်ပါး လက်ခံနိုင်ပြီး ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ ငြင်းဆိုလို့ရမဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Would you like to seeafilm tonight? (ဒီည ရုပ်ရှင်တစ်ကားကားကြည့်ချင်လား?)
I’m afraid I can’t go out tonight. I’ve gotatest tomorrow. (စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီညတော့ အပြင်မထွက်နိုင်ဘူး။ မနက်ဖြန်မှာ စာမေးပွဲရှိလို့။)
Why don’t we have some Chinese food? (တရုတ်အစားအစာ စားကြရင်ဘယ်လိုလဲ?)
Sorry but I don’t particularly like Chinese food. (စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က တရုတ်စာကို အထူးတလည် မနှစ်သက်လို့ပါ။)
How about takinganice walk? (လမ်းလျှောက်သွားကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲ?)
I’d really rather not takeawalk this afternoon. (ဒီနေ့လယ်တော့ ကျွန်တော် သိပ်လမ်းမလျှောက်ချင်သေးလို့ပါ။)
Would you like to come to the museum with us? (ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပြတိုက်ကို လိုက်ခဲ့ပါလား?)
Thank you, but it’s not my idea ofafun afternoon out. (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ နေ့လယ်နေ့ခင်းမှာ ဒီလိုသွားရတာကို မပျော်လို့ ပါ။)
Let’s go foradrive. (ကားလျောက်စီးရအောင်။)
Sorry, but I’m not really fond of driving for the fun of it. (စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အပျော်သက်သက် ကားလျှောက်စီးရတာကို မကြိုက်လို့ပါ။)
Why don’t you stay the night? (ညအိပ်လိုက်ပါလား?)
That’s very kind of you, but I really have to get back to the city. (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြို့ကို ပြန်မှ ဖြစ်မှာမို့ပါ။)
** ကမ်းလှမ်းချက် (offer) တစ်ခုခုကို မငြင်းပယ်ခင်၊ များသောအားဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောရတာကို သတိပြုပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုခုကို ပေးလာတဲ့အခါ ထိုတစ်စုံတစ်ခုကို မလုပ်ချင်၊ မလုပ်နိုင်ကြောင်းကို အကြောင်းပြချက်ပေးပြီး မငြင်းပယ်ခင် - အရင်ဦးဆုံး၊ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတာက ယဉ်ကျေး ကြောင်း ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ “No” သက်သက် ဖြေတာက လွန်စွာမှပင် ရိုင်းပျတယ်လို့မှတ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။
To မပါတဲ့ ကြိယာရဲ့ အခြေခံပုံစံကို
I’m afraid I can’t ……….. (စိတ်မကောင်းပေမဲ့ မ……………. နိုင်ပါဘူး။)
I’d (really) rather not …….. (………..ကို သိပ်ပြီးတော့ မ…………ချင်ပါဘူ။း)
အစရှိတဲ့ ပုံစံတွေမှာ အသုံးပြုရပါတယ်။
“Have to do” ကို to မပါတဲ့ ကြိယာရဲ့ အခြေခံပုံစံနဲ့တွဲတဲ့ ပုံစံကိုတော့
Thank you (thank you forsaking, thank you very much, etc) but, I have to……… (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်……………….ကို လုပ်ဖို့ရှိနေလို့ပါ) - ဆိုတဲ့ ၀ါကျပုံစံမှာ သုံးပါတယ်။
It’s not my idea of…………. ရဲ့နောက် က တော့ noun တွဲရပါမယ်။
ကြိယာရဲ့ ဖြစ်ဆဲကာလပုံစံ (V-ing)ကိုတော့
I don’t particularly like………. (……………. ကိုတော့ ကျွန်တော် အထူးတလည် မကြိုက်လို့ပါ။)
I’m not (really) fond of …….. (………………ကို ကျွန်တော် မနှစ်သက်လို့ပါ။) - ဆိုတဲ့ ၀ါကျမျိုးမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Esl.about.com မှ Kenneth Beare မှ Saying 'No' Nicely မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by myinthlaing on May 5, 2015 at 19:17
Thanksalot your Lessons
I enjoy learning your Lessons
Permalink Reply by sweswewin on June 16, 2015 at 10:21
Permalink Reply by U Tin Soe on February 9, 2016 at 19:29
Permalink Reply by Hnin Hnin Soe on February 11, 2016 at 0:15
Permalink Reply by Khaing Thazin Oo on February 15, 2016 at 12:41